Booliska Scotland ayaa shaaciyey magaca iyo dhalashada qofkii weerarka mindida ka geystay… – Hagaag.com
Booliska Scotland ayaa shaaciyey magaca iyo dhalashada qofkii weerarka mindida ka geystay…
Posted on 28 Juunyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Booliska Scotland ayaa ku dhawaaqay ninka boolisku ay dileen oo weerarka mindida ka geystay magaalada Glasgow uu ahaa Badr al-Din Abdullah Adam, oo 28 jir ah una dhashay dalka Sudan.
Booliska ayaa bartooda Twitterka ku sheegay in 28 jirkan la aqoonsaday, iyadoo la raacayo macluumaadka uu siiyay kol hore Wasaaradda Arimaha Gudaha horaantii sanadkan.
Waxay intaas raacisay “baaritaannada waa la sii wadi doonaa duruufaha ku xeeran dhacdada Glasgow.” Booliska ayaa qoraalkooda ku sheegay in xaalada sarkaal booliis David White, oo ku dhaawacmay weerarka ay tahay mid deggan.
Lix qof – oo uu ku jiro nin boolis ah – ayaa lagu mindiyeeyey hudheelka Park Inn gudaha magaalada Jimcihii ka hor inta aan toogashada lagu dilin qofka weerarka geystay.
Booliisku waxay sheegeen inaysan raadineynin tuhmanayaal kale oo aysan ula dhaqmin dhacdada mid argagaxiso, qofka weerarka geystana waa qofka kaliya ee dhintey.
Waxaa xusid mudan in saddex ka mid ah dadka kale ee ku dhaawacmay weerarka ay ahaayeen magangalyo-doon iyo laba qof oo ka shaqeeya hoteelka. Shantooda ayaa wali waxay ku jiraan isbitaalka, mid kamid ahna wuxuu ku jiraa xaalad halis ah.
Dhowr warbaahin oo Ingriis ah ayaa sheegay in ninka weerarka geystaa uu u dhaqmay si qof waalan oo kale isla markaana waxaa ka muuqday calaamado muujinaya inuu la xanuunsanayay dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda saacadihii ka horreeyay dhacdada, booliskuna ma aysan xaqiijin faahfaahintaan.
Qiyaastii 100 qof oo magangalyo-doon ah ayaa degenaa hoteelka tan iyo bilowgii qalalaasaha Coronavirus, hay’adaha samafalka ayaa Sabtidii waxay muujiyeen walaac ku saabsan xaaladaha gudaha hoteelka iyo saameynta uu ku leeyahay dadka deggan.